Madaxweyne ku xigeenka Apple ee kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada ayaa xilka ka dagaya dhamaadka sanadka | Waxaan ka socdaa mac
VP-ga Apple ee kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada inuu xilka ka dago dhamaadka sanadka
Jagada cusub ee ay la wareegtay Denise Young Smith, oo mudo lix bilood ah noqotay Apple kuxigeenka madaxwaynaha kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada, kadib markay ahayd 3-dii sano ee la soo dhaafay wuxuu u shaqeynayay sidii Madaxweyne ku-xigeenka Apple ee Shaqaalaha Adduunka, jago uu u yimid ka dib markii uu ka soo qabtay shaqooyin isku mid ah shirkado kale.
Kahor intaanan bilaabin inay si gaar ah diiradda u saarto booskeeda cusub, Denise waxay durba bilowday inay ku lug yeelato kala duwanaanta shaqaalaha. Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa taas xaqiijiyay Denise Young ayaa ka tagi doonta shirkadda 7 bilood ka dib markii la beddelay jagooyinka shirkadda dhexdeeda.
Isla af hayeenkii shirkadda ee ku dhawaaqay bixitaanka Denis Young ee Apple, ayaa ku dhawaaqay qofka beddeli doona. Christie Smith, waxay ahayd qofka mas'uulka ka noqon doona madaxweyne ku xigeenkan. Christie waxay ka shaqeyneysay 17-kii sano ee la soo dhaafay Deloitte jagooyin kala duwan oo khuseeya shirkadda waxayna si toos ah ugu wargelin doontaa Tim Cook. Warbixinta u dhiganta rubuca ugu dambeeya sanadka qeybta kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada waxaa sameyn doona Madaxweyne ku xigeenka Shaqaalaha Deirdre O'Brien.
Markii Denise la wareegay doorka cusub ee Apple, horeyba horeyba Waxaan shaqsi ahaan ula hadlay Tim Cook si aan uga baxo shirkadda, laakiin Cook wuxuu ku guuleystey inuu ku qanciyo inay laalaado ilaa ay ka helayaan bedel ku qanacsan shirkadda, sida uu qabo TechCrunch, sidaa darteed muranka sababay safarka ay ku tagtay Kolombiya, halkaas oo ay uga qeyb gashay shir looga hadlayey kala duwanaanshaha oo ay xumaatay fasirtay qaybo ka mid ah soo jeedintiisii, sabab uma noqonin isbeddelkan jihada waaxdan.
Waxaan dareemayaa jahwareer marka kala duwanaanta ama erayga kala duwanaanta lagu calaamadeeyo dadka midabka, haweenka, ama bulshada LGBT. Qolka waxaa ku jiri kara 12 kursi oo midab leh oo indho buluug ah leh, dadkaan sidoo kale waa lagu dari karaa qaybtaan maxaa yeelay waxay bixin doonaan khibrad nololeed oo ka duwan tii hore.
Wax yar ka dib markii uu ku booday muranka, Denise waxay sheegatay ereyadeeda ma aysan matalin siyaasada kala duwanaanta ee Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » VP-ga Apple ee kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada inuu xilka ka dago dhamaadka sanadka
U isticmaal furayaashaada fara-marinta leh kaliya iTunes ama Spotify, macOS High Sierra
Tani waa sanduuqa gaadiidka ee Apple ay ku dari karto Apple Watch